समुदायमा फैलियो ओमिक्रोन, जोखिम समूहलाई घातक हुनसक्छ
डा. सुदीप खड्का बुधबार, पुस २८, २०७८, २०:३०
नेपालमा कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरियन्ट समुदायमा पुगिसकेको छ। यो भेरियन्ट निकै छिटो फैलिन सक्छ। यही सातादेखि यसले नेपालमा पनि आफ्नो प्रभाव देखाउन थालिसकेको छ। त्यही कारण संक्रमितको संख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको छ।
कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउँदैमा यो भेरियन्ट नसर्ने होइन। खोप लगाएकालाई पनि सर्न सक्छ। अझै पनि खोप नलगाएका थुप्रै व्यक्ति हाम्रो समाजमा छन्। कतिपय जोखिम समूहका व्यक्तिलाई खोप लगाएको धेरै समय भएको छ भने गम्भीर लक्षण देखा पर्न सक्छ।
ओमिक्रोन धेरै संक्रामक भए पनि धेरै घातक मानिएको छैन। तर, केही व्यक्तिमा गम्भीर समस्या आउन सक्छ। संख्यात्मक वृद्धि हुँदै गर्दा गम्भीर लक्षणका बिरामीको संख्या पनि बढ्दै जान्छ। जसले गर्दा स्वास्थ्य संस्थामा चाप बढ्ने हुन्छ र उपचारमा समस्या हुन सक्छ।
कोरोना भाइरसको पहिलो र दोस्रो लहरमा धेरैले ज्यान गुमाए। पहिलो लहरबाट शिक्षा लिएर दोस्रो लहरका लागि आवश्यक सजगता अपनाउन ध्यान नदिँदा धेरै क्षति भयो। त्यसैले पहिलेको जस्तो उपचारको अभावमा ज्यान गुमाउने स्थिति नरहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले अक्सिजनलगायतका आधारभूत आवश्यकताको जोहो गर्नु आवश्यक छ।
यो भेरियन्ट कम घातक छ भन्नुको अर्थ हानी गर्दैन भन्ने होइन। बढी संक्रामक भएको हुनाले अझै सचेत हुनुपर्छ। संक्रमितको सम्पर्कमा आएको थाहा हुन साथ आफूलाई आइसोलेट गर्नुपर्छ।
कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र टेस्टको दायरा बढाएर गरेर सकेसम्म धेरै संक्रमितलाई पहिचान गर्न जरुरी छ। हवाइ वा स्थल नाकाबाट छिर्ने सबैलाई अनिवार्य पीसीआर परीक्षण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।
अहिले पनि सरकारसँग विभिन्न खोप मौजाद छ। त्यसैले खोप अभियान तीव्र बनाउनुपर्छ। स्मरण रहोस् खोप लगाएको २-४ हप्तापछि मात्र खोपले पूर्ण सुरक्षा दिन थाल्छ। एक वा दुई मात्र नलाएका व्यक्तिलाई खोप दिने र जोखिम समूहमा रहेका सबैले अविलम्ब बुस्टर खोप लगाउने अहिलको प्राथमिकता हो।
सर्वसाधारणले स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै उपाय अपनाउनुपर्छ। भौतिक दूरी कायम गर्ने, भिडभाडमा नजाने गर्नुपर्छ। मास्कको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्छ।
फेरि लकडाउनको स्थिति आउनु नदिनु सबैभन्दा राम्रो हो। त्यसका लागि हामी आफैँ सचेत हुनुपर्छ।
(डा. खड्का भाइरोलोजिस्ट हुन्।)